Jan. Cali Gaab: “Baabuurkii saacad ka badan wadada yaala waa lala wareegayaa” – idalenews.com
Taliyaha ciidamada waddooyinka Dowladda Federaalka Soomaaliya Jan. Cali Xersi Barre (Cali Gaab) ayaa ka warbixiyay gaarigii loo adeegsaday qaraxii ka dhacay xarunta Maxkamadda G/Banaadir oo watay Taargo iyo sharciga gaadiidka Dowladda, isagoona sheegay in Taaergaha uu watay gaariga lagu fuliyay qaraxa aanu lahayn Taargaha ku dheganaa.
Waxa uu sheegay Taliye Cali Gaab inay baaritaano dheeraad ah ku sameeyeen taargaha gaariga nooca Caribta loo yaqaan aanu lahayn taargaha lagu soo dhejiyay, wuxuuna caddeeyay in Lambarka taargaha qaraxa qaraxa lagu fuliyay uu lahaa gaari noociisu yahay Surf.
“Markii aan baarnay taargaha gaariga qaraxa lagu fuliyay, waxaan ogaanay inuusan lahayn oo lagu soo dhejiyay” ayuu yiri Jan. Cali Xersi Barre (Cali Gaab) oo sheegay inay hayaan dokumentiga taargaha lagu dhejiyay gaariga qaraxa lagu sameeyay, wuxuuna sheegay inay baaritaano dheeraad ku sameynayaan gaariga taargadiisa sharciga ahayd loo adeegsaday in lagu dhejiyo gaari kale oo aanu lahayn.
Mar uu ka hadlayay sharciga gaadiidka dalka, waxa uu sheegay Taliyaha in gaarigii lagu helo isagoo taargadiisa cid kale adeegsaneyso ay sharciga marinayaan isla markaana uu la kulmayo ciqaab dhinaca sharciga la xariirta.
Jan. Cali Gaab waxa uu sheegay in marka ay soo dhammaadaan baaritaanada ku saabsan taargaha qaraxa loo adeegsaday iyo shaqsigii lahaa ay soo saxaafadda u soo bandhigayaan natiijada ka soo baxda howlgalada baaritaanada ah.
“Baabuurkii hal ka badan meel yaala waa lagala wareegayaa qofkii lahaa” ayuu yiri Jan. Cali Xersi Barre (Cali Gaab) oo sheegay in gaadiidka la dhiganayo waddooyinka hareerahooda ay tallaabo sharci ah ka qaadayaan.